စီမံကိန်း - တောရိုင်းငှက်များကိုအကန့်အသတ်မရှိ - ဂူဂဲလ်မြေပုံများနှင့်ပျော်စရာ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 29, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မှာမျိုးရှေးရှေးကျော် တောရိုင်းငှက်များ Unlimited သူတို့ရဲ့စတိုးဆိုင်မြေပုံများကိုကူးပြောင်းရာတွင်ကျွန်ုပ်အကူအညီကိုတောင်းခံခဲ့သည် Google။ ငါမကြာသေးခင်ကဘာကြောင့်များတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရတာလဲဟုသင်တွေးမိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစီမံကိန်းကိုပန်းခြံမှထွက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
တစ်ပတ်အတွင်းအချိန်ပြည့်အလုပ်သစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီကောင်းစွာရောက်ရှိနိုင်ရန်သေချာစေလိုသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ စတီဖင်ဟာထူးခြားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။ နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Todd ကကျွန်တော်တို့ကိုမပို့ခင် code တွေကိုပိုကောင်းအောင်နဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် application ကို PHP, MySQL, Ajax နှင့်တည်ဆောက်ထားပြီး Wild Birds 'ည့်သည်များသည်သူတို့နှင့်နီးသောနေရာများကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးနှင့်ဂူဂဲလ်မြေပုံ API ၏နောက်ဆုံးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးစွမ်းရည်များကိုရယူရန်အချက်အလက်များကို KML ဖိုင်များဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒေတာများကိုနေရာတစ်နေရာထက်မကထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းနောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပျော်စရာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်သူများအနေဖြင့်မြေပုံပေါ်ရှိသူတို့၏စတိုးဆိုင်များ၏တည်နေရာများကို ဝင်ရောက်၍ မွမ်းမံနိုင်သည့် (အပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်သည့်!) အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း၏အကြိုမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
လုပ်စရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းတိုးတက်မှုမှာယခုအချိန်အထိထူးခြားနေသည်။ o ည့်သည်များ၏တည်နေရာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အပြင် to ည့်သည်၏လိပ်စာမှမည်သည့်တည်နေရာကိုမဆိုလမ်းညွှန်ပေးရန် GeoIP ဒေတာဘေ့စ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ပျော်စရာ စိတ်ရှည်ပါ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါမည်။
Blog-Tipping: Alpesh Nakars ၏ Blogosphere
30:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 02
ကောင်းပါတယ် Doug! ကျွန်ုပ်တို့သည် အလားတူတစ်ခုခုကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါသည်။ အားပေးမှု ယခုအပတ်တွင် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဖိုင်ကို အပ်လုဒ်တင်ခွင့်ပြုထားပြီး ကနေဒါကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်မှလွဲ၍ အလွန်ဆင်တူပါသည်။ သိပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲ!
အလုပ်သစ်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၎င်းအကြောင်း နောက်ထပ်ကြားရဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ /ဂျင်
30:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 20
Doug သည် ပရောဂျက်ကို ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေပုံရသည်။ ဤကဲ့သို့သော ပရောဂျက်တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများကို သင်နှစ်သက်မှာ သေချာပါသည်။
သင့်ဖောက်သည်၏ အလုံးစုံစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကို တိုးတက်စေမည့် အကြံပြုချက်များ ပေးခြင်းသည် သင့်အတွက် အလွန်ခိုင်မာသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - ကောင်းသောအလုပ်။